La kulan – 6 sanno jir Aabaheed oo cuuryaan ah daryeesha! | Radio Himilo
Home / Caruurta / La kulan – 6 sanno jir Aabaheed oo cuuryaan ah daryeesha!
La kulan – 6 sanno jir Aabaheed oo cuuryaan ah daryeesha!
Posted by: Mahad Mohamed July 14, 2020
Himilo – Gabar 6 sano jir ah oo ku nool gobalka Ningxia ayaa taniyo markii ay hooyadeed isaga fogaatay nolosha – iyada iyo aabaheed oo cuuryaan ah – waxay daryeelkii ugu wacnaa u fidisaa aabaheed oo cuuryaan ah.
Previous: Real Madrid oo ku kalsoon in Mbappe uu imaanayo garoonka Bernabeu